Kachasị wepụ wepụ suppliers na Factory | China Standardized wepụ emepụta
E si na nje nke Soy (Glycine max.) Ewepụta ya kwa afọ nke genus leguminosae, yana odo na-adịghị emighị emi iji wepụ ntụ ntụ ọcha, isi pụrụ iche na uto ọkụ. Ihe na-arụ ọrụ bụ soy isoflavones, Soy isoflavones bụ ụdị flavonoids, nke bụ ụdị metabolites nke abụọ e guzobere na uto nke soybean. A na-akpọkwa isyflavones soy phytoestrogens n'ihi na a na-ewepụta ha na osisi ma nwee ụdị ọdịdị nke estrogen.
E wepụtara ya na mgbọrọgwụ akọrọ nke polygonum cuspidatum sieb.et.zucc, nwere agba aja aja na-acha ọcha ntụ ntụ, isi pụrụ iche na uto ọkụ. Ihe ndị na-arụ ọrụ bụ resveratrol, ọ bụ ụdị ngwongwo polyphenol na-abụghị flavonoid, nke bụ antitoxin nke ọtụtụ osisi mepụtara mgbe a kpaliri ya. Nkịtị resveratrol nwere CIS na ntụgharị akụkụ. Na okike, ọ kacha dịrị na mgbanwe mgbanwe. Lọ abụọ ahụ nwere ike ijikọta na glucose iji mepụta CIS na trans resveratrol glycosides. CIS na trans resveratrol glycosides nwere ike ịhapụ resveratrol n'okpuru ihe nke glucosidase na eriri afọ. Trans resveratrol nwere ike gbanwee na CIS isomer n'okpuru UV irradiation.
E wepụtara ya na rutaceae akpọnwụ nke phellodendron amurense, nwere ntụ ntụ na-acha odo odo, isi pụrụ iche na uto ilu, ihe ndị na-arụ ọrụ bụ berberine hydrochloride, Ọ bụ quaternary ammonium alkaloid dịpụrụ adịpụ na Rhizoma Coptidis na Ọ bụ isi ihe na-arụ ọrụ nke Rhizoma Coptidis. A na-ejikarị ya agwọ ọrịa ọnyụnyụ ọbara bacril, nnukwu gastroenteritis, cholecystitis na-adịghị ala ala, conjunctivitis, suppurative otitis media na ọrịa ndị ọzọ, nwere mmetụta ọgwụgwọ dị ịrịba ama. Berberine hydrochloride bụ isoquinoline alkaloid, nke dị n'ọtụtụ osisi nke ezinụlọ 4 yana 10 genera
Epụtara ya na Andrographis paniculata (Burm.f.) Ness, na agba aja aja odo na-acha ọcha ntụ ntụ, pụrụ iche isi na ilu uto. Ihe na-arụ ọrụ bụ andrographolide, Andrographolide bụ ihe eji eme ihe, ihe bụ isi na-arụ ọrụ nke ahịhịa osisi Andrographis paniculata. Ọ nwere mmetụta nke iwepụ okpomọkụ, nsị, mgbochi mkpali na analgesic. Ọ pụrụ iche curative utịp ke nje na malitere ịrịa elu akụkụ okuku ume na tract ọrịa na ọnyụnyụ ọbara. A maara ya dị ka ọgwụ nje na-agwọ ọrịa.
E wepụtara ya n'ụgbụgbọ kpọrọ nkụ nke Cinnamomum cassia Presl, jiri ntụ ntụ aja aja, ísì pụrụ iche, oseose na ụtọ ụtọ, Ihe ndị na-arụ ọrụ bụ Cinnamon polyphenols, Cinnamon polyphenol bụ polyphenol osisi, nke nwere ike ịkwalite njikọ nke collagen na ahụ mmadụ mgbe ọ dị etinye obi gị dum, ma nwee ike wepu ahụ mmadụ n’ahụ. Ọ nwere ike mee ka ọmụmụ mkpụrụ ndụ nke mmadụ na-emewanye ngwa ngwa, mee ka mkpụrụ ndụ nke mmadụ na-arụ ọrụ nke ọma, meekwa ka ịka nká na-egbu oge.
E wepụtara ya site na mgbọrọgwụ akpọnwụ nke Eurycoma longifolia Jack, Brown odo ntụ ntụ, Na-esi isi ụtọ pụrụ iche ma na-elu ilu, ihe ndị na-arụ ọrụ bụ eurycomanone, eurycomanone nwere mmetụta nke ịkwụsị ịba, wepụ mmịrị na jaundice, na-eme ka yang dị ike, na-eme ka ike anụ ahụ na ume dị ike, belata ike ọgwụgwụ, nwoke ịga ụlọ ọgwụ, mgbochi ọnya na antipyretic. O nwekwara mmetụta nke ime ka ọrịa dị iche iche dị ka ọbara mgbali elu na ọrịa shuga.
Citrus aurantium wepụ (Citrus aurantium L.) sitere na citrus aurantium. A na-ekesa Citrus aurantium, osisi nke rue rue na China. Na ọgwụ ndị China, ọ bụ ahịhịa ọdịnala nke eji eme ka agụụ na-edozi qi (ike). N'ọrụ mgwa ihe bụ hesperidin na ọ bụ ìhè odo ezi ntụ ntụ na nta isi. Obere soluble na methanol na hot glacial acetic acid, ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara soluble na acetone, benzene na chloroform, mana enwere ike ịgbanye na alkali na pyridine. A na-eji Hesperidin eme ihe na ụlọ ọrụ nri dị ka ọgwụ antioxidant nkịtị ma nwee ike iji ya na ụlọ ọrụ ịchọ mma.
E wepụtara ya site na buds buds nke sophora japonica (Sophora japonica L.), osisi leguminous. Ngwurugwu mmiri ọgwụ ahụ bụ rutin, quercetin, genistein, genistin, kaemonol na ihe ndị ọzọ na-acha odo odo na-acha odo odo. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị ọrụ ahụike n'ụlọ na mba ofesi amụola ihe ọ na-arụ, wee chọpụta na ihe ndị na-arụ ọrụ ya nwere ọrụ antibacterial, antiviral, anti-inflammatory and anti-oxidation, na-enwe ezigbo mgbochi na ọgwụgwọ na-ebelata ịdapụ ọbara, na-eme ka ọbara dị nro arịa, mgbochi mkpali na tonifying akụrụ.
A na - enweta mkpụrụ osisi Epimedium site na osisi Berberidaceae, nke sitere na epupụta a mịrị amị nke Epimedium (Latin: Epimedium Brevicornum Maxim). Ọ bụ aja aja odo ntụ ntụ na pụrụ iche isi na nwere elu ọgwụ uru. Epimedium wepụ tumadi nwere Icariin ma jiri ya dị ka ezigbo okike osisi aphrodisiac ruo ogologo oge. Icariin nwere otutu ihe omumu banyere ihe omumu ihe na otutu ihe omumu ogwu na achoputala ya.Ọ nwere ike ọ bụghị naanị ịbawanye ọbara nke akwara obi na arịa cerebrovascular, na-akwalite ọrụ hematopoietic, kamakwa enwere mmetụta nke ịkpụpụta akụrụ na adịghị ike, mgbochi tumor na na na. Ọ bụ soluble na mmiri, ethanol na ethyl acetate, ma insoluble na ether, benzene na chloroform.
E wepụtara ya na mkpụrụ osisi a mịrị amị nke ahịhịa flax (Linum usitatissimum L.) nke ezinụlọ Linaceae. Ihe na-arụ ọrụ bụ Secoisolariciresinol Diglucoside (SDG) nwere agba aja aja na-acha odo odo. A na-ahụ SDG ka phytoestrogens, nke dị ka estrogens mmadụ. A na-ahụ ya na mkpụrụ osisi flax, ọdịnaya ya na-adabere n'ụdị flax dịgasị iche iche, ihu igwe na ọnọdụ obibi. Enwere ike iji SDG nke amịpụtara n'ụzọ dị ka mgbakwunye na nri nri, kamakwa agbakwunye ya na ihe ịchọ mma iji gbochie ma gwọọ nká nke anụ ahụ site na njirimara ha.